‘पतञ्जलि’को गोरखधन्दामा कसले राख्ने नजर ? – अमृता लम्साल Weekly Nepal
‘पतञ्जलि’को गोरखधन्दामा कसले राख्ने नजर ? – अमृता लम्साल
पतञ्जलिको उत्पादनहरूमा हुने भनिएको आयुर्वेदिक वस्तुहरूको मात्रा, जुन ती वस्तुहरूको प्याकिङ्गमा लेखिएको हुन्छ, त्यो त खासै त्यति ठूलो हुँदैहोइन । तर, पनि, पतञ्जलिले भारतीय मात्रै होइन, नेपाली बजार पिटिरहेछ । यो देख्दा दु:ख त लाग्छ तर, सस्तो र (आँखाले नदेखे पनि) शरीरलाई खराब गर्ने कुरा नमिसिएको भन्ने विश्वासले उपभोग नगर्न पनि सकिन्न । त्यसैले ‘राजनैतिक गफ’ गरेर या ‘पार्टीहरूलाई गाली गरेर’ मात्रै ‘खाँटी राष्ट्रवादी’ हुन खोज्नेहरूले नेपाली अर्थव्यबस्थालाई धराशायी हुनबाट रोक्न केही कदम चाले हुने †